Klopp oo shaaca ka qaaday in Saddex ka mid ah xiddigaha kooxdiisa Liverpool ay seegi doonaan kulanka Man Utd
Saturday January 18, 2020 - 01:38:16 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Macalinka reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa wuxuu maanta ku dhawaaqay in Saddex ka mid ah xiddigaha kooxdiisa Liverpool
ay seegi doonaan kulanka Man United ee horyaalka Premier League, kaasoo Axada ka dhici doono garoonka Anfield.
Jürgen Klopp ayaa wuxuu shaaca kaga qaaday in xiddig ee kala ah Fabinho iyo Joël Matip ay diyaar u yihiin inay kala qeybqaataan kooxda Liverpool kulanka ay habeen dambe la ciyaarayaan Manchester United.
Macalinka reer Germany ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in labadiisan xiddig ee Fabinho iyo Joël Matip ay si wanaagsan kaga qeyb galeen tababarka ay kooxda Liverpool ugu diyaar garoobeysay kulanka Man United labadii maalin ee la soo dhaafay, kaddib markii ay ka soo kabteen dhaawacyadii ay ka kala qabeen, canqowga iyo Jilibka sida ay u kala horeeyaan.
Laakiin macalin Jürgen Klopp ayaa xaqiijiyay isla waqtigaas, inta uu ku gudi jiray shirkiisa Jaraa’id in kulanka ay wajahayaan Manchester United ay ka maqnaan doonaan xiddigaha kala ah Naby Keïta, Dejan Lovren iyo James Milner.
Klopp ayaa su’aalihii lagu dhax weydiiyay shirka jaraa’id jawaabihii uu ka bixiyay waxaa ka mid ahaa:
"Haa, waxay u muuqataa in Fabinho iyo Joel Matip ay soo laabanayaan, waxay ka qeyb qaateen cashiradii tababarka ee shalay iyo maalintii ka sii horeysay, taasoo ka dhigan inay u badan tahay inay qeyb ka noqon doonaan liiska kooxda”.
"Laakiin seddexda kale wali kama aysan qeybqaadanin, balse waxay ku dhow yihiin inay soo laabtaan, waxaan u maleynayaa in Dejan Lovren uu ka qeyb gali doono tababarka kooxda 100%, laga bilaabo Isniinta soo aadan”.
"Laakiin ma aqaano xaaladda ciyaartoyga kale ee Naby Keïta iyo James Milner, si gaar ah, ma doonayo inaan deg dego, waxaana qeyb kaga dhigi doonaa tababarka, marka la ii sheego inay diyaar yihiin”.